Abantu abaningi bathambekela kakhulu ukuthatha amaphupho abo. Futhi kunesizathu esithile salokhu, njengoba amaphupho, njengombuso, enesiqiniseko sangempela. Kodwa-ke, ungesabi uma lobusuku "uchitha" ezandleni zomphathi obusondayo noma, nakakhulu, "wahamba" ngasemgwaqweni e-negligee ...
Ungathula idumela lakho! I-Psychoanalysts ithi: nakanjani noma yiliphi owesifazane ongakwazi ukulala ocansini, okusho into eyodwa kuphela - unempilo. Amaphupho okudinga ukuziphatha okubi akuwona ubufakazi bokungcoliswa kwezenzo nokungaziphathi kahle, kodwa nje ukufakazela ukucabanga okucebile nokuthuthukiswa okuphelele komuntu. Ngaphezu kwalokho, akuwona wonke amaphupho aphikisayo asekelwe ekuhlangenwe nakho kohlelo lwezocansi.
Ngokuphambene nenkolelo evamile, lezimanga ezimnyama ezithandana nabesilisa ocansini ziyiziqephu ezingaphansi kakhulu kunezingamantombazane ezindala kanye "nezitshalo eziluhlaza okwesibhakabhaka." Amaphupho amancane angalindelekile futhi angalindelekile, angase afaneleke njengendlela yokuphambuka eyodwa noma ukuphambene, agcwalise konke lokhu, empeleni kuyisignali ukuthi lo mphupho ubhekene nezinkinga ezithile zokuziphatha. Lokhu kungase kube ukunganeliseki emkhakheni wezenhlalakahle, izinkinga zokuzihlonipha, nezihlobo noma abasebenzi abasebenza nabo. Empilweni yangempela, lezi zinkinga azitholakali, noma umuntu nje akafuni ukucabanga ngakho, ukhetha, njengencini, ukufihla ikhanda lakhe esihlabathini. Futhi ephusheni, lapho kungenalutho lokukhishwa ejokeni lezinto ezivamile, zonke izikhalazo zethu kanye nezifiso ezingenziwanga ziphuma. Ngakho-ke kuyasiza kakhulu ukukhumbula amaphupho akho ahlukumezayo, ukuze usondelane kakhulu "ucabangele" ekukhanyeni kosuku.
Abanye besifazane bavame ukulala ocansini ephusheni abanezihlabane ezihlukahlukene. Khona-ke uzoba nomlingani nomqondisi wefilimu odumile ngokubonakala kwenkathi ye-March, ngokuzumayo u-soloist weqembu elidumile le-pop uyophupha, osombusazwe odumile othungayo noma umethuli we-TV ... Akuveli impilo yobusuku, kodwa i-epic movie ejabulisayo!
Kuyiqiniso ukuthi ukusondelana nobuntu obuningi kubonakala kubantombazane abancane - izidalwa ezinjalo zothando, baqale ukuqaphela ubulili babo. Bakhathele yimicabango nemizwa engacacile, baqala ukufuna into efanelekayo yokubheka. Kodwa phakathi kwama-coevals abathintekayo, njengombuso, akunjalo. Futhi-ke embonweni webusuku kungcono kokuphelela komuntu. Kuhle futhi ayitholakali. Futhi ukungenakufinyeleleka kulokhu kuyasiza kakhulu: kungumhlobo womshuwalense ngokudumala okubabayo okulindele uthando lwangempela.
Uma amaphupho anjalo evakashelwe owesifazane omdala, lokhu kukhuluma ngokusuka kwakhe kokungakwazi ukuxhumana nobulili obuhlukile, noma ngokungavikeleki kwakhe ekukhangeni kwebesifazane. Umbuzo ongokwemvelo ungase uphakamise: "Khona-ke kungani ezibona ephusheni ngezinga eliphezulu kakhulu? "Kulula kakhulu: akukho okuhlobisa owesifazane onjengendoda ehamba eduze kwakhe. (Ngamanye amazwi: yimuphi umdobi, okufana nokubamba.) Lo mbono ubeka umqondo ovamile oqhubeka uhlola owesifazane hhayi ngokuvumelana nemfanelo yakhe siqu, kodwa kusuka esikhundleni somyeni wakhe noma umthandi wakhe. Ngakho-ke, "ukuzinikela ekutheni" ngodumo, owesifazane - engazi lutho! - bezama ukuthuthukisa ukuzethemba kwabo. Okusho ukuthi umqondo wakhe ubeka uphawu olulinganayo phakathi kwakhe nomlingani wakhe "wezinkanyezi".
IZINDLELA ZASE LESBIAN
Amaphupho lapho owesifazane enza uthando nomngane wakhe omkhulu, osebenza naye noma omaziyo omusha, awukwazi ukubiza amnandi. Lokhu kungukuthi, ephusheni, ukuzwa kuyamnandi, kodwa-ke ... Ukuphenya emasithombeni ekuseni ekuseni, abaningi bathululela ukukhukhuma okubandayo futhi, belahlekelwa izinsalela zokuzihlonipha, babuze umbuzo obulalayo: "Ngempela ngi ...?"
Hlala phansi, awuyena ongithandana nabo. Kungenzeka ukuthi, ukulamba, okungukuthi, ukungaboni kahle kwemizwelo, ukuthinta ngobumnene, ama-caresses ehlanjululweyo nokuqonda okuhlangene nomlingani wakho, ukuphoqa ekusebenzeni okunjalo ebusuku. Ngezinye izikhathi, uma kungabikho ukusondelana okungokomoya, kungaba nzima ukuba owesifazane avume kumyeni wakhe ukuthi ulindele kuye hhayi kuwo wonke ubuhlobo ayejwayele. Isibonelo, amaphupho omzimba womlomo, futhi ungumphikisi onamandla wezo "ngokweqile".
Ukunganeliseki ngokocansi, isifiso sokuzwa izinzwa ezingatholakali empilweni yangempela, ukudlula endaweni engazi lutho, ziguqulwa zibe izithombe ezingalindelekile. Ukuthambekela nokufudumala, njengokubusa, kuhlotshaniswa nesimiso sesifazane, ngakho-ke umlingani uthatha ukubukeka kwesifazane ngokuzumayo. Futhi ngokuzithandela ukuthola izidingo zomzimba wesifazane, unikeza ithuba lokubona "isibhakabhaka ngamadayimane aluhlaza okwesibhakabhaka."
Ukuze uzwe okuthile okufana nalokho, zama ukutshela ngohambo lwakho lobusuku ukuya esiqhingini saseLesbos kumthandi wakho. Mhlawumbe lokhu kuzomsiza ukuba alalele, azwele futhi abe mnene.
INDLELA NOKUTHUTHA KWEZINDLELA
Uma uphupha ngezikhathi ezithile ukuthi ulala ngesilwane - ingonyama, inja enkulu, ibhere, njll, lokhu akuyona neze ithuba lokuzicabangela ukuthi ungumuntu ongcolile ongenamathemba. Kungenzeka ukuthi akuzange kwenzeke nakanjani ukuba uzame okufanayo ngokoqobo. Futhi lokhu kuyaqondakala, ngoba imvelaphi yalolu phupho akusiyo ukuxhaswa ngokocansi kodwa kwengqondo. Ukuthi isilwane sidlala indima yendoda ephusheni ngokufakazelayo kufakazela ukuthi owesifazane wesaba ngokungenakuqhathaniswa kwe "abesilisa, abanobudlova". Yilokho ekujuleni komphefumulo wakhe ukuthi ubheka bonke abameleli bobulili obuhlukile. Kungenzeka ukuthi umbono onjalo waqala ebuntwaneni ngaphansi kwethonya likababa onzima nobaba (noma umama, owathanda ukuphindaphinda ukuthi bonke abantu bastards kanye scoundrels).
Uma usephusheni elithambekele kanzima nomuntu ongakajwayele obuso bakhe abangekho ngisho nesikhathi sokubona kahle, lokhu akusho ukuthi uyindoda enengqondo, umceli wezinto eziyingozi. Ngokuphambene nalokho! Ekuphileni, ngokuqinisekile unamathele ekuziphatheni okuqinile, bheka kude lapho okuthile "okuthile" kubonakala kwithelevishini, ngisho nasendoda ohlala naye iminyaka eyishumi, ungavumeli "ama-nononsense ahlukene". Futhi ngokuzumayo - kuwe!
Phakathi naleso sikhathi, isenzakalo sikaMnu X sikabusuku akuyona ingozi. Lesi yisikhathi sokucabangela ukuthi awunamathele kakhulu emvelweni wakho wemvelo, imizwa yangempela nezifiso ngenxa yobandlululo olungcwelisayo? Mhlawumbe kubalulekile ukuphumula, ukuyeka ukuziphatha kwakho ngokobulili futhi ungazibuze umbuzo oqhubekayo: "Yini umyeni wami azocabanga ngami?"
Khumbula, ngobusuku obungazi konke konke kwakuhlukile. Wazi ukuthi ngeke uphinde uhlangane naye. Kulesi simo, umphumela womunye uhambahamba usebenza. Futhi uma uzama ukuguqula iphupho empeleni? Lokhu akusho ukuthi kufanele uhambe yonke indlela, zama nje ukuhlala wedwa nendoda yakho ethandekayo mayelana nokuthi ungumama onobuhle, umfazi oyisibonelo kanye nomsizi womhlekazi. Zizwe uqobo nje owesifazane - ekhululekile, efiselekayo, ekhohlisa. Khumbula ukuthi ubulala kanjani ephusheni, lokhu kusho ukuthini kuwe, wazizwa kanjani? Mhlawumbe empeleni kukhona okuthakazelisayo okukulindele kunokwephupho.
Uyakhumbula i-anecdote mayelana nekati, ekhononda ukuthi ngosuku olwandulela ngalo e-attic wadlwengulwa ngu "omunye owehlayo"? Ngakusasa into efanayo yenzeke futhi. "Namuhla ngizobuya futhi ..." usho ngokumomotheka.
Nangu owesifazane ophupha ukuthi udlwenguliwe, engazi lutho amaphupho aso simo. Ngoba iqine ngokuqinile ekuvinjweni kwekhaya ngokocansi. Wavelaphi? Mhlawumbe, esemncane, wezwa inkulumo ethi "omdala" inkulumo yokuthi konke lokhu "ukungcola" akukwazi ukuheha owesifazane ohloniphekile. Noma umama uphakamise ukuthi intombazane ehloniphekile akufanele ibenzele amehlo abafana futhi ngokuvamile ibonise isithakazelo endaweni "ehlazo" yokuphila.
Ukuziphatha ngokwemvelo, okungukuthi, uma owesifazane engesabi ukuveza imizwa yakhe, ubonise isinyathelo futhi athole injabulo yocansi, kubonakala sengathi uyaziphethe kabi futhi engamukeleki emgodini wazo zonke lezi zivuno. Futhi-ke, ezama ukuzakhohlisa, owesifazane uqala ukufuna isifiso lapho angakwazi ukubamba izinyoni ezimbili ngetshe elilodwa: ukuzikhulula emithwalweni yalokho okwenzekayo nokujabulela ubulili.
Ukusondelana nomnikazi womuntu kungenye yezifundo ezivame kakhulu zokuphupha amaphupho. Uma umphathi uyindoda ehlaba umxhwele, kungase kube kuhle ukuthi iphupho liye laqhubeka nokulangazela kwakho okungazi lutho nosuku nemicabango edlalwayo. Uma engumfana onamahloni ngemikhuba yombhali nomshushisi, kufanelekile ukubheka isihluthulelo sokucacisa izinto zakhe zobusuku phakathi kokuhlangenwe nakho kwakhe okuyimfihlo.
Ucabanga ukuthi isikhundla sakho sifana nalokho okufanelwe ngempela? Ingabe izimfanelo zakho zebhizinisi ziyaziswa? Unelisekile ngesimo sakho siqu? Kungenzeka ukusho ngezinga eliphakeme lokuthi kungenzeka ukuthi ungumuntu onomdlandla, osebenza kahle, wazi kahle ukuthi yini oyifunayo. Kodwa kuze kube manje awuphumelelanga ekuqaliseni izinhlelo zakho. Kungenzeka ukuthi ngalokhu uyakwazi ukusebenzisa futhi hhayi izindlela eziqondile ngokuphelele.
Akuyona imfihlo esondelene nomphathi ovumela ukuthi "intandokazi" ibe nesimo esikhethekile eqenjini futhi iphakamise izinga lezemisebenzi. Iphupho lakho, eqinisweni, alisho ukuthi usulungele ukuguqula i-romance yesevisi ngaphandle kokucabangela nje kwezemisebenzi. Kodwa ukucabangela kwakho sekuvele kuqalile ukucinga imigwaqo ye-bypass ekufezeni izinhlelo zamademoni.
Kungase kubonakale kungajwayelekile ukuthi amaphupho anjalo avame ukuvakashelwa abesifazane abangenakubekezelela umphathi wabo. Kuyinto engalindelekile kakhulu ukuba babe nobulili ephusheni, okusho ukuthi uzwela noma ngisho nokunamathisela into enenzondo yabo. Lokhu kuchazwa yisifiso esifihlekile sokuphinda sihlukumeze, ukuze simbone ebuthakathaka futhi singenakuzivikela. Isimo, lapho indoda enqunu ihamba ngamandla, ihambisana nalokhu kanye nokusemandleni.
Ukumboza ngamatshe: incazelo yencwadi engcono kakhulu yephupho
Ukugxuma ezindebeni ephusheni
Ukuhlanganyela nomfana: Ingabe leli phupho lifaka izinkinga?
Izimpungushe zingabheka ngani?
Ukuchazwa kwamaphupho ngendandatho yesiliva
Kungani sikhala ephusheni? Ukuhunyushwa Okudumile
Isiboniso "Izwi" isizini 5 siqalisiwe: ukuqala kokuqala, izithombe namavidiyo
Izindlela eziveziwe eziphezulu ezi-3 ezenziwe nge-"wet"
Isobho sezinhlanzi - Indlebe
Konke mayelana nama-facials
Izigaba eziyishumi zokuxhumana phakathi kwendoda nowesifazane
Ukudla kwabesifazane abakhulelwe ngosuku, imikhiqizo eyimpoqo
Ukuthi ubuhlobo buyashintsha kanjani emva kocansi obungane
I-hypnosis ithinta kanjani ukwazi nokungazi komuntu?
Iyiphi intengo umuntu athola ubuhle bemvelo?
I-Horoscope ngoDisemba, isibonakaliso sezingonyama zezinkanyezi
Iqoqo elisha le-Kanye West e-Fashion Week eNew York
Ama-waffles aseBelgium ane-sauce eluhlaza okwesibhakabhaka
I-cocktail yobisi ngezithelo kanye ne-ginger